Kuvhara muWheelchair Kunogona Kunakidza | Karman® Mawiricheya
Kuvhara muWheelchair Kunogona Kunakidza
Posted on December 15, 2017 November 20, 2020 by csr 1687
Iwe Unogona Kufunga Kuvhara?
Wakamboona iyo youtube nyeredzi dzinogona kutora kamera dzotanga kuvhota uye zvakare kunakidzwa kutarisa? Izvo zvinogona kuve iwe futi! Unogona kutanga kubloga kweanenge emahara nekuti unogona kushandisa yako smartphone uye zvakanyanya chero laptop kana iwe uchida kugadzirisa mavhidhiyo kune akakosha maitiro. Iyo vlog inogona kuve nezve chero chinhu uye iwe uchave uine yakanaka nguva kuvhota nezve yako upenyu. Kutanga YouTube chiteshi uye kutumira zuva nezuva kunotungamira kune kubatana kutsva uye shamwari nekuti ivo vanozofarira izvo zvaunoita uye vachada kubatana mumavhidhiyo. Edza uye uripe pfuti nekuti hauzomboziva kuti ingashandure chii. Muchikamu chino, isu ticha tsanangura kuti nei iri zano rakanaka kutanga kublogging uye nzira dzaunogona kutanga kuti ive ngarava inofamba iwe.
Kuvhara mune hwiricheya
Kuvhara mune wiricheya inogona kurira sebasa rakaoma asi hazvisi nekuti unokwanisa kuwana zvese. Kune akawanda wiricheya vlogs unogona kuenzanisira vlog yako shure uye pano mumwe muenzaniso. Kana iwe ukaongorora vhidhiyo yacho uchaona kuti hazvina kuoma kutanga nekuti haufanire kunge uri nyeredzi yeHollywood kuti bhora rikunguruke. Vhidhiyo yekutanga yaunotumira inogona kungova iyo chikonzero iwe chauri kutanga yako vlog uye zvakare iwe unogona kusanganisira nei iwe urimo wiricheya kana iwe usingafarire kupa iyo yemunhu ruzivo kunze. Kumbira shamwari kuti ive mune yako yekutanga vhidhiyo iwe haunzwe wakasununguka kuva wega mune yekutanga. Ita kuti vakuzivise kana chimwe chinhu chiedze kuve chinogadzira chinobatsira iwe mukufamba kwenguva. Kumbira mhuri neshamwari mazano pane izvo mhando Zvemukati zvaunofunga iwe unofanirwa kutumira uye kuzvitarisa. Imwe nzira yekuuya nenzira dzekutanga yako wiricheya vlog zvinogona kunge zviri kutumira posheni kumaakaunzi enhau uye kuvabvunza izvo zvavanofarira kuona pane yako YouTube chiteshi.
Iwe haudi chero zvishongedzo zvemhando yepamusoro nekuti zvese zvaunoda iwe ingori foni yauinayo. Iyo yemahara youtube app inoita kuti iwe ugoisa zvakananga kune yako chiteshi pasina matambudziko. Kana iwe uchida kutenga yako wega kamera ingave iri zano rakanaka zvakare uye kukwidza yako mutambo. Unogona kuwana mamwe makamera akanaka pane ichi link inosanganisira akawanda makamera. Tsvaga iyo vhidhiyo kamera yaunoda kushandisa uye tanga kuvhota uye rangarira kungofara nayo nekuti ndiyo poindi.
Mushandisi weWheelchair uye Mentor
Imbwa dzakakwana Shamwari kwauri